Ezibuhlungu inyaniso malunga dating kwi-i-shanghai Jays Ehlabathini
Kuqala ngaphandle, ndifuna ukuqondisisa ukuba abe cacisa ukuba andikho ukubhala malunga zonke guys kwaye girls kwi-i-shanghai. Ndiyazi ukuba wonke umntu eyodwa, kwaye budlelwane nabanye unako vary. Ekubeni wathi ukuba, ndiyakholwa oko ndiza malunga ukuthi ingaba isicelo inani elikhulu abantu i-shanghai. Ndiza basing oku ntoni mna ve ebone (kwaye experienced firsthand) kwi-phantse iminyaka emine apha. Ukubeka ngayo ngokulula ukuba abaninzi young Isitshayina abafazi ukujonga kuba elide ubudlelwane Western guys ingaba ke kusilela. Kukho izizathu ezininzi kuba oku. Omnye isebenziseke isizathu kukuba kukho aren t ngokwaneleyo Western guys apha ukuhlangabezana imfuneko (akungombono ingxaki kuba ukuba ukhe ubene i-Western guy). Enye kukuba Western guys bakholisa ukuba kuza kuba i-shanghai embalwa ezayo okanye ngaphantsi, kwaye rhoqo kuba akukho inzala kwi-settling phantsi apha. Abo bamele pretty kakhulu, kodwa zabo s esinye isizathu esenza ukuba ezininzi abantu bacinga kodwa musa t uthi ngaphandle nelikhwazayo ngenxa yayo s a elinovakalelo ngokulawulwa – yenkcubeko umehluko. Mna uphumelele khange get kwi myriad ka-yenkcubeko imilinganiso njani China kwaye NATHI thelekisa kwaye umahluko ukwenza njalo bekuya kuthabatha kuncinane kakhulu kakhulu ixesha get kude sesishumi. Mna ll nje briefly bathethe malunga abanye neeyantlukwano kwi-dating kwaye budlelwane nabanye. Kwi-KWETHU, abantu bakholisa ukuqala dating kwi i-ngaphambi koko ubudala kwe kwi-China. Lokukhula phezulu ndandisele bayakhuthazwa ukuba umhla girls (nge abazali bam, bahlobo bam, bazalwana emidlalo coaches kwaye nkqu ootitshala), kwaye ndino wam wokuqala girlfriend xa ndandisele (puppy uthando.). Thina ngokubanzi kuba i-unye kulo lonke esikolweni ukuze dating ngu fun, hayi ezinzima, kwaye ukulungilelyo kuba real budlelwane nabanye kamva ebomini. Ngenxa ukuba Americans (nezinye Westerners) bakholisa ukuba ingaba ezininzi kokuthenjwa dating ngexesha kwakukho entliziyweni zethu. s. Umahluko oku ne-China, apho kude kube kutshanje yayo s sele tabooing kumhla esikolweni, nentlutha abantu musa t betha i dating icandelo lomboniso de ekholejini okanye emva koko. Kwaye, ironically, ngokukhawuleza njengokuba abanye girls gqiba college nabazali babo ufuna kwabo ukufumana watshata. Ngoko ke, ukususela oko ndinako zibalisa, budlelwane nabanye ezicingelwa kakhulu ezinzima nto kwaye pathway ukutshata kuba ngaphezulu esiqhelekileyo-minded Isitshayina. Ngenxa nokungabikho dating amava, kwaye yokuba abaninzi bahlala ekhaya kunye abazali kakuhle kwi adulthood, ezininzi ulutsha Isitshayina abafazi kuza ngaphandle njengoko childish ukuya Entshona guys. Kwesinye isandla, ndiyazi ukuba kukho plenty of young abantu i-shanghai abakhoyo ngaphantsi esiqhelekileyo kwaye ndiyakuthanda iqela uyonwabele kwaye hook phezulu casually. Ngokwenene, kukho ikhangeleka kuba ucacile ngokwahlula phakathi iqela girls kwaye esiqhelekileyo girls. Kwaye loo nto kanye kanye kutheni yayo s nzima kuba i-Western guy ukufumana ezinzima Isitshayina girlfriend Ukuba guy ngu ngaphandle ukukhangela iqela girls, wathi isn t ikhangela a ezinzima budlelwane (okanye lowo nje ufuna kuba abanye fun ngexesha kwakhona ikhangela a girlfriend). Ukuba lowo isn t iqela guy kodwa lowo, kwenzeka ntoni ukuba ahlangane iqela kubekho inkqubela, yena mhlawumbi uphumelele khange abe kakhulu anomdla wakhe njengoko a ezinzima girlfriend ngenxa yokuba Intshona guys idla musa t ufuna settle phantsi kunye kubekho inkqubela abo drinks kwaye clubs kakhulu kwaye kulula ukuthabatha ekhaya. Ezininzi umphinda-phinde ngo guys (zombini Isitshayina kwaye Western) aren t nkqu yokufuna ukwazi ezi girls ngenxa yokuba kuphela kuhlangana phezulu kwi-indoda yempumlo uncwadi apho iphethe incoko ikufuphi-ukwenzeka. Ngaphezulu esiqhelekileyo Isitshayina girls kanjalo babe hayi snag i-Western guy, kuba inani izizathu. Ngamanye amaxesha baba haven t kokuba kangangoko dating amava kwaye bakholisa ukuba abe nervous kwaye ukuba neentloni, nto leyo aph ngomhla wokuqala kodwa efumana ubudala ngokukhawuleza. Okanye yena abe ngoko ke abachaphazelekayo kunye nokugcina a esiqhelekileyo umfanekiso ukuba yena exerts kakhulu abancinane sexuality, kwaye i-Western guy ngubani osetyenziselwa ngakumbi uqinisekile girls uza kube ngumdla ukuba akukho t ubuncinane abanye icebiso ka-sexuality (oku akuthethi t kuthetha ukufumana yesitalato, oko kuthetha nje ebonisa kokuthenjwa yakho physicality). Esiqhelekileyo girls kanjalo bakholisa ukuba vumelani babo imihla zilawula incoko oko kusenokuba ngenxa ulwimi barrier (bona. idla dating ngesingesi) okanye yena abe ethambileyo kwi submissive indima kuba tradition s ngenxa yayo. Nangeyiphina indlela, ayo s na uhlobo ukuze kubekho inkqubela Western guys idla siye. Uhlobo kubekho inkqubela Westerners uza ufuna umhla seriously ngu-kwenye indawo kwi-ephakathi iqela kubekho inkqubela kunye neenkokeli zemveli kubekho inkqubela. Kwaye yena ufumana kunzima ukufumana, ubuncinane phakathi phantsi-eli qela kwi-i-shanghai. Ukuba edlulileyo incopho malunga ulwimi barrier ibalulekile kakhulu. Zingaphi Entshona-Isitshayina couples ingaba uyayazi othetha Isitshayina kunye ngamnye ezinye endaweni isingesi. Hayi ezininzi, ndiza guessing. Ngoko ke, i-mere yokuba ezininzi Isitshayina girls dating Western guys musa t ukuthetha isingesi fluently ufumana enye mba. Njengoko sifumana ubudala nangaphezulu mature, ngoko ke yenza iincoko zethu kwaye hlobo incoko uyakwazi ukuba kunye umntu olilungu fluent ngolwimi ebotshiwe ukuba kufuneka okungakumbi ubunzulu kwaye ngezixhobo ezahlukeneyo kunokuba yinto kunye umntu abo ingu ukufunda ulwimi. Iyagqitha pha zombini iindlela. Ukuba mna umhla a Isitshayina kubekho inkqubela abo akubonakali t ukuthetha isingesi, sinako ukufumana ukwazi ngamnye ezinye ngenxa ndithetha abanye Isitshayina. Kodwa emva ngelixa yena uya mhlawumbi get okruqukileyo wam elula Isitshayina izimvo. Beka konke oku kunye kwaye ntoni ufumane. Ezininzi Entshona guys abo musa ukuthatha wobulali girls seriously kwi-i-shanghai ngenxa yokuba mhlawumbi akukwazeki ukufumana okanye aren t ikhangela ezinzima budlelwane contenders. Ndathi ekuqaleni ukuba uninzi young Isitshayina girls ukujonga kuba elide ubudlelwane Western guys ingaba ke kusilela. Ndimele cacisa baya kusilela kuba ngoku. Kodwa njengoko baya get kunoko, babe ukukhula kwi uhlobo abafazi ukuba kubaluleke ngakumbi kusenokwenzeka ukuba ibe solid iqabane lakho kuba i-Western guy. Plenty yabasetyhini apha ingaba. Kwaye kunjalo, kukho plenty of Western-Isitshayina couples apha ukuba ingaba ngempumelelo elide. Mna kanjalo ufuna ukongeza ukuba andifuni t cinga na yenkcubeko norms kuba noba icala ingaba ilungelo okanye ezingachanekanga ndiza kuphela ukuzama name kwi imeko njengoko ndiya bayibone. Mna kananjalo musa t kuthetha ukuba phakamisa ukuba Isitshayina abafazi kufuneka umkhosi ngokwabo ukuba adapt ukuba yintoni i-Western guy ifuna. Ndicinga ukuba kunye amadoda nabafazi kufuneka kwenza iinzame ukufunda malunga omnye nomnye kwaye kuba ethanda ukutshintsha kuba ngcono partners. Nangona kunjalo, ngenxa yokuba ihlala ukuba ezininzi Entshona-Isitshayina couples bakholisa ukuthetha isingesi kwaye landela Ikomishini yenkcubeko norms, kuba ngcono okanye worse. Njengoko ngakumbi Westerners kuba fluent kwi-Isitshayina kwaye sifunde okungakumbi Isitshayina inkcubeko ukuba ayikwazi ngokuqinisekileyo tshintsha.
Mna isiqalekiso ixesha ukuba ndandisele ngonaphakade kunye neenkokeli zemveli Isitshayina eks. Ndithi Stamos cuddling fest kubaluleke ngokwenene indlela blissful nge western iqabane lakho ndine ukuthi ukuba kubalulekile ngoko ke, inyaniso akukho ikhristali ekunene okanye ezingachanekanga icala, noba ekubeni iqela kubekho inkqubela okanye ekubeni esiqhelekileyo kubekho inkqubela, okanye nawuphi na yenkcubeko norms. Njengoko ixesha elide njengoko ekubeni thina, live kuba namhlanje kwaye uzame ukuba bonwabele nokuba ubomi inikezela kunjalo kuba kum noko. Kuya kwenzeka ntoni ikakhulu ukuba abantu umgwebi yi-zethu nationalities nkqu nangona abanye abantu benze hayi kuwela na iindidi, nto leyo ezibuhlungu. Heee Jade, ndiya kuvuma ukuba ngamanye amaxesha siye generalize kakhulu kakhulu yi-nationality. Layo s kuphela oluntu indalo ukuzama ukuba categorize kwaye yenza lula izinto, kwaye abantu efanayo nationality bakholisa ukuba ingaba ilanlekile izinto ngokufanayo, kodwa akusoloko kunjalo. Girls mna ve ebhalwe kuzo i-shanghai musa t kuwela noba ezi zimbini iindidi. Haj Jay, wonke Umntu ezibuhlungu inyaniso malunga dating kwi-i-shanghai kuyafana na ezibuhlungu kunjalo kuba Isitshayina girls, ngoko ke ndimangazekile uthini ukuba iinqwelo guys okanye kumazwe angaphandle girls. Ezibuhlungu kakhulu.
Nangona, ndiya kuvuma ukuba lo mhla akukho fun, ngoko ke kubalulekile iselwa ezibuhlungu kuba zombini. Heee Jade, ayo s hayi nje i-mba kuba Isitshayina girls yayo s kanjalo i-mba kuba langaphandle guys, ingakumbi okkt ukuba zithe apha ixesha elide. I-fun intlanganiso ilanlekile ka lula girls kwaye partying wakhe ngaphandle emva ngeli lixa, kwaye yayo s kungabi lula (wam imbono) ukufumana kubekho inkqubela ukuba banako ngenene basondelelane ukuba baza kuba mkhulu incoko kunye. Oku akuthethi t kuthetha ukuba Isitshayina girls aren t okulungileyo ngokwaneleyo, ayo s nje ukuba ulwimi barrier neeyantlukwano mna wathetha malunga kwi-i-ezenza kube nzima ukwenza uhlobo lonxulumano ukuba kukhokelela a ezinzima budlelwane. Ndiyacinga ukuba oku kanjalo usebenza non-Isitshayina Asians. Ndicinga ukuba captured i-notion kutheni Western guys kuba nzima ixesha ekubeni a budlelwane ngezixhobo zemveli Isitshayina Asian umfazi beck. sibe kuza ngaphandle njengoko childish njengoko inkcubeko yethu akubonakali t ngenene ukukhuthaza dating okanye casual budlelwane nabanye. Siphinda-ngakumbi ezisuka zande courtship kwaye cultivating ezinzima budlelwane nabanye. Ndiyaqonda yona ikunceda ukuba omabini ingaba ngobukho yenkcubeko umehluko. Unxibelelwano kakhulu ebalulekileyo, kodwa awunokwazi ngenene imposiso yorhwebo lwangaphakathi yena kuba fluent ngesingesi, ungakwazi
← Chatroulette USA Isitshayina - Ividiyo Ukukhangela Injini e Ukukhangela
Dos kwaye Musa'ts Intlanganiso Dating Omnye Asian Abafazi →